रुपन्देहीका स्थानीय तह प्रमुखहरुलाई आयुर्वेद अभिमुखीकरण-Nagarikaawaj.com
रुपन्देहीका स्थानीय तह प्रमुखहरुलाई आयुर्वेद अभिमुखीकरण
नागरिक आवाज/बुटवल, जेठ २५ ।
आयुर्बेद चिकित्सातर्फ आकर्षण बढ्दै गएको कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयले बुटवलमा शनिवार आयोजना गरेको आर्युवेद सम्वन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रमा बोल्ने बत्ताहरुले प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्वन्धित आयुर्वेदले दीर्घ रोगको समेत उपचार हुनेभएकोले त्यस तर्फ आक्रषर्ण बढेको बताए ।
अभिमुखीकरणमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले परम्परागत उपचार विधि भएकाले पनि त्यस तर्फ पछिल्लो समय आयुर्वेद तर्फ आक्रषण बढ्दै गएको बताए । उनले वनजंगलमा स्रोत रहेको भन्दै त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
बरिष्ट आयुर्वेद कन्सल्टेन्ट डा. बुद्धि प्रसाद पौडेलले आयुर्वेदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक नभएको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे । उनले आयुर्वेदमा प्रतिअसर समेत नहुने भन्दै आयुर्वेद उपचार विधि अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए ।
रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरणमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आयुर्वेद सम्वन्धमा जानकारी समेत गराइएको थियो ।
लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयका प्रमुख डा. नालिननाथ तिवारीको अध्यक्षता, कबिराज बिष्णुहरी आचार्यको संचालनमा भएको कार्यक्रममा अभिमुखीकरणको डा. बुद्धि प्रसाद पौडेल र डा. कलावति वि.कले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले धारणा राखेका थिए ।
हरेक स्थानिय तहमा आयुर्बेद चिकित्सा बिस्तार गर्नेका लागि याे महत्वपूर्ण हुने कबिराज बिष्णुहरी आचार्यले बताए ।